It mumwe zvikuru dzakakurumbira Blackjack vakasununguka bhonasi kusiyana yakataurwa Chinogadzirisa Games. Zviri chaizvoizvo ibatanidzo tafura mitambo miviri - Blackjack uye kadhi Three-Poker. Rinopa zvose mureza Gameplay ane Blackjack vakasununguka bhonasi pamwe kusarudza kuti vanoisa divi bheji kuti pokeria ruoko. Zvinonzi pakurira maererano American Blackjack mitemo uye nokudaro peanoita macheki kuti Blackjack, kusiyana European Blackjack. The paanopfuura European Blackjack ndechokuti kana peanoita inoita Blackjack, ukangogamuchira kurasikirwa bheji rako yepakutanga uye kwete rinotsemuka uye Paarismängud.
Chinangwa mutambo ndiko kuti pokeria ruoko nokusvika mubatanidzwa makadhi rokutanga uye rechipiri kuti mutambi wacho pamwe kadhi chokutanga munyengeri wacho. The shoma uye kunonyanyisa bheji akabvumira pangoro mutambo vari $1 uye $2000 zvichienderana zvakadaro. The divi vachibhejera zvinhu zvinosiyana kushoma pakati $1 kuti vaifanira kuti $200.
Zvinonzi aitambisa 6 shop pakati 52 makadhi.
Makadhi ose reshuffled pamberi neimwe dhiri.
Dealer pamire 17s zvose.
Double pasi kutenderwa pamusoro chero makadhi maviri.
Uchawana wokuwedzera kadhi pashure kaviri pasi.
Kukamurwa anobvumirwa kamwe chete, kusanganisira Aces.
Double pasi ari kwakabvumirawo pashure mahwanda.
Vatambi vanofanira kuisa divi bheji pamberi makadhi vari vaibata kuti ukwanise kurutivi bheji payouts.
Basic vachibhejera zvinhu Payouts:
ichi Blackjack vakasununguka bhonasi achipa payback anosvika 99.63% vawane vachibhejera zvinhu.
The siyana Side vachibhejera zvinhu zvinowanikwa uye avo Payouts ndeinotevera:
Chomumba umo Combination pamusoro 3 nemakadhi chete suit. Payout reshiyo iri 5:1.
Straight umo 3 makadhi akatevedzana chinzvimbo zvakavhenganiswa masutu. Payout reshiyo iri 10:1.
Three Rudzi umo 3 makadhi ose akavhengana masutu asi pamwe chete chinzvimbo. Payout reshiyo iri 25:1.
Straight chomumba umo 3 makadhi akatevedzana chinzvimbo chete suit. Payout reshiyo iri 40:1.
akakodzera 3 Rudzi umo 3 makadhi pamwe chete chinzvimbo chete suit. Payout reshiyo iri 100:1.
The divi bheji kusakundika sezvinoreva Blackjack iri 92.86%.
mutambo uyu achiuya inowanikwa iri mvere chaizvo uye nyore kunzwisisa. The Gameplay izvi Blackjack vakasununguka bhonasi Ndakatengesa nenzira musono chaizvo netsika iyo rinobvumira vatambi kuona zvakawanda mafaro uye mafaro. The 2-in-1 mutambo kunokupa mukana kuwana hombe payout uchingoti divi vachibhejera zvinhu kunze dzinokosha vachibhejera zvinhu. The imba kumucheto pakuparwa chikuru vachibhejera zvinhu zviri 0.41% achiri 4.62% pakuparwa divi vachibhejera zvinhu. ichi Blackjack vakasununguka bhonasi ndechimwe chezvipo zvakanakisisa kuwedzera kune 21+3 Blackjack zvakasiyana.